फातिमा रित्तै फर्कने पक्का,अब एमसीसी फिर्ता हुन्छ या म्याद थपिन्छ ? – Butwal 24 News
फातिमा रित्तै फर्कने पक्का,अब एमसीसी फिर्ता हुन्छ या म्याद थपिन्छ ?
September 10, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on फातिमा रित्तै फर्कने पक्का,अब एमसीसी फिर्ता हुन्छ या म्याद थपिन्छ ?
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली विहीबार बिहान कतार एयरको विमानबाट काठमाडौंमा ओर्लंदै गर्दा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरालाई खुमलटार बोलाए । प्रचण्डलाई भेटेर फर्केका महराका हातमा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई लेखेको जवाफी पत्रको प्रिन्ट कपी थियो । र, उनी खुमलटारबाट निस्केर प्रधानमन्त्री शेरहादुर देउवालाई भेट्न जाने हतारोमा थिए । यही दौडधूपकै बीचमा रातोपाटीले महरालाई सोधेको थियो कि एमसीसीको स्पष्टीकरणसहितको जवाफी पत्रपछि अब एमसीसी सहयोग सम्झौता पास हुन्छ कि के हुन्छ ? यसमा सत्ता गठबन्धनको धारणा के हो ?
मुख्यमन्त्री पोखरेलको टिप्पणी– प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई ‘अपहरण’को आरोप पनि लगाएछ